Home News Wasiir Ducaale oo ka hadlay Rabshadaha ka socda Baydhabo!!
Wasiir Ducaale oo ka hadlay Rabshadaha ka socda Baydhabo!!
War-Saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Amniga Gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa looga hadlay rabshadaha Maalintii labaad ka socda Magalada Baydhabo ee G/Baay.
Qoraalka Wasaaradda amniga kasoo baxay ayaa waxaa Shacabka Magalada Baydhabo loogu baaqay inay ilaaliyaan xasiloonida.
Sidoo kale Shacabka ayaa laga dalbaday inay la Shaqeeyaan kusimaha Madaxweynaha Koonfur Galbeed,waxana la faray laamaha Amniga ka Shaqeynta Amniga Magalada Baydhabo oo ay weli rabshado ka dhacayaan.Gelinkii dambe ee Maanta ayaa waxaa Gudaha Baydhabo galay Ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya,waxaana la sheegay in xaalada Magalada ay iminka tahay mid sidii hore ka wanaagsan.
Hoos Ka Akhriso War-Saxaafadeedka Wasaaradda Amniga.
Previous articleSomalia gives up its fishing rights to China through corruption
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo fariin u diray shacabka Muqdisho
Xiisad Soomaalida Itoobiya iyo Oromada u dhaxeeysa oo Curatay!!
Dowladda Farmaajo ayaa isoo qabatay, waxana isoo daayay RW Itoobiya (Wareysi...